Vatyairi vemarori Born to be Free Green / Bhuruu yevarume nevakadzi - THE INDIAN FACE
Born to be Free Green / Bhuruu
+ Mitambo yakawanda
YAKO CAPI INOTAURA KWAI
Kapu yako inotsanangura zvauri uye neunhu hwauri kutakura mukati. Tinokugadzai makopi edu The Indian Face® yakafuridzirwa nemitambo inotizivisa sechinhu uye seuzivi hwehupenyu hwepamoyo. Nekotoni kumberi uye mesh kumashure. Inogadziriswa yemhando yekuvhara Snapback kukwana chero saizi yemusoro. A classic yakafuridzirwa nema80s uye ma90s. Edu marori makepisi akagadzirwa neakakomberedza nhongonya. Ivo vakakwana kuti vaperekedze iwe pane ako mafambiro ane yakasarudzika maitiro.
Makapu emitambo ave chiratidzo chemitambo yaakabatana nacho. Ivo vanokuzivisa iwe somunhu uye nemararamiro aunoita hupenyu, ivo vanopfuura kufambiswa, ivo chiratidzo chako somunhu.
Saizi yeunisex yevarume nevakadzi
Kaputi yerori inozivikanwa zvakare muchirungu se "gimme cap" kana "feed cap" ndeyechinyakare chivharo chivharo asi ine mesh kumashure. Maitiro emakorofi makepi akaberekwa muma60s apo muUnited States vatyairi vemarori vaitakura mombe, vakatanga kuashandisa. Ngoro dzemarori dzakazove chikamu cheyunifomu yebasa remarori. Iwo aive maratidziro ake, chidhindo chechokwadi cheunyanzvi mutakuri.
Parizvino vava chiratidzo chechizvino fashoni iyo isingori chete inozadzisa basa rekudzivirira kubva kuzuva asi zvakare inokupa iwe kubata kwekuzivikanwa. Nhasi kune vashoma vakakurumbira munyika yemafashoni nemitambo, vasina kuoneka nekombodo mesh munzvimbo dzemarudzi ese, ese muzhizha uye munguva yechando.
UNONZWA ZVINONYANYA SECHIKAMU CHAKO
Iko kuda kuita zvemitambo chinhu chiri kupararira zvakanyanya zuva rega rega munyika dzese uye tsika dzese dzepasi. Iko kukosha kwekunzwa zviri nani, kurega dhiraina uye kuzvisunungura kubva kumatambudziko ezuva nezuva zuva nezuva, ita tsika yemitambo yatove mudiwa wehupenyu hwevanhu vakawanda uye vazhinji.
NAWE, IVAKURU VAKABEREKWA SEI?
Isu mukati The Indian Face Isu takazvarwa kuti tiite chero mutambo unoita kuti tinzwe tiri vapenyu, mune zviri nani mushe uye pamusoro pezvose, izvo zvinounza chisiko zvishoma padyo nehupenyu hwedu. Kana chimwe chinhu chiri nani pane kurarama, kuri kugona kurarama nemweya, kuchiva uye kusimba.
* Hati The Indian Face® inosangana nemhando yepamusoro yemhando uye inozivikanwa uye inoparadzirwa munyika dzinopfuura makumi matatu pasirese nekuda kwekukosha kwavo kusingakundike kwemari.
Born to be Free Green / brown 40.00 €
Akazvarwa kuScuba Dive Ichena / Bhuruu / Tsvuku
Akazvarwa kuScuba Dive Ichena / Bhuruu / Tsvuku 40.00 €
Born to be Free Dzvuku / Black
Born to be Free Dzvuku / Black 40.00 €
Free Soul Ichena uye yebhuruu
Free Soul Ichena uye yebhuruu 40.00 €
Born to Ultratrail Dzvuku / Black
Born to Ultratrail Dzvuku / Black 40.00 €
Born to be Free Dema / Grey
Born to be Free Dema / Grey 40.00 €
Born to be Free Ichena / Bhuruu / Tsvuku
Born to be Free Ichena / Bhuruu / Tsvuku 40.00 €